धेरै चाखलाग्दो लेख। मलाई खुशी छ कि तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो कि मार्केटिंग अटोमेसन सबै आकारका कम्पनीहरूका लागि हो, किनकि यो सामान्य मिथक हो कि केवल विशाल व्यक्तिहरूले स्वचालन उपकरणहरूबाट फाइदा लिन सक्दछन्।
एन्थोनी बर्ग @ (@AnthonyBergs)
डिसेम्बर १, २०१ 15 2016:२:5 अपराह्न
मारिया, प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद।
तपाइँसँग बिल्कुल सहमत यो एउटा मिथक हो जुन "ब्रेस्टेड" हुनुपर्दछ !!!
सुझावहरूको लागि धन्यबाद। म नयाँ वर्षमा मार्केटिंग अटोमेसन प्रयोग गरेर योजना बनाउँदैछु र सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। तपाईं प्लेटफर्महरू बारे के सोच्नुहुन्छ, जस्तै getResponse? धेरै साना कम्पनीहरूको समस्या भनेको विपणन अटोमेसन सफ्टवेयरको लागि बजेट हो। त्यसोभए तालिमको लागि समय चाहिन्छ।
नमस्ते एडना, तपाईंले वास्तवमै मलाई मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्मको चयनमा मेरा विचारहरू साझा गर्न प्रेरित गर्नुभयो। GetResponse एक ठोस प्लेटफर्म हो - तर तपाईले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईले यसलाई प्रयोग कसरी गरिरहनु भएको छ र तपाईसँग पहिले नै के स्रोतहरू छन् भनेर विश्लेषण गर्नुपर्दछ। मैले यी बारेमा लेखेको छु एक मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्म खरीद मा कारकहरू यहाँ।
महान पोष्ट, डगलस! प्रत्येकका लागि पढ्नु पर्छ जसले मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्म खरीद गर्ने सोचमा छ। तपाईको अनुभव साझा गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
एडना, तपाईको प्रतिक्रियाका लागि धन्यबाद। मैले getResponse कहिले पनि प्रयोग गरेको छैन, त्यसैले वास्तवमा, म केहि सुझाव दिन सक्दिन। साना कम्पनीहरूको लागि बजेटको समस्या छ, तर म निश्चित रूपमा भन्न सक्दछु कि धेरै जसो मामिलाहरूमा यसको लायक हुन्छ। प्रशिक्षणको प्रश्न पनि अवस्थित छ तर प्राय उपकरणहरू वा सफ्टवेयरले तपाईंको सेवालाई तपाईंको व्यवसायको आवश्यकतालाई मिल्छ कि भनेर निश्चित हुनको लागि नि: शुल्क परीक्षणहरूको प्रस्ताव गर्दछ।